Ọ bụ Deutsche Bank ka e bu ụzọ zọpụta mbụ? : Martin Vrijland
gbara akwụkwọ OZI OZI	by Martin Vrijland	na 10 July 2019	• 6 Comments
Ikekwe ị nwetara ya; na layoffs na Deutsche Bank (DB). N'ịbụ ndị a na-amaghị, ọtụtụ puku ndị ọrụ were akwụkwọ ozi ha na Monday ikpeazụ ma nwee ike ime ya n'emeghị ebere hapụ ụlọ ahụ ozugbo. Osimiri kachasị elu nke redundancy rutere London na Washington DC, ma ọtụtụ puku ndị ọzọ n'ụwa. N'ozuzu, e kwere ka 18.000 kwụsị ọrụ ha na n'afọ ọzọ ọnụọgụgụ niile ga-abawanye na ndị ọrụ 74.000. Nke ahụ bụ nnukwu ụlọ egwuregwu egwuregwu zuru oke na mmetụta dị oke mkpa, n'ihi na London naanị Ndị ọrụ 3000 nwere ike na mberede na-enweghị ike ịkwụ ụgwọ ha ma ọ bụ ịgbazite n'ihi na ohere nke ọrụ ọhụrụ abụghị kpọmkwem elu.
Ọ dị ịrịba ama na ụlọ akụ dị otú ahụ na-amalite n'oge na-adịghị anya mgbe oge akụ na ụba na-adịghị mma na akụnụba. Dị ka a ga-asị na n'ime ọtụtụ narị ijeri ndị dị otú ahụ, ego ole na ole na-akwụ ụgwọ ọrụ abụghị nanị idebe mmiri. N'ihe gbasara m, anyị nwere ike ịhụ ebe a ihe mgbaàmà nke nsogbu ahụ dịworo anya, nke a ga-enye ntakịrị push. Ọ bụ ezie na anyị nwere ike ikwu na puku mmadụ ole na ole n'ime ndị mmadụ bi na 65 nde mmadụ dị na United Kingdom anaghị enwe mmetụta dị ukwuu, anyị ekwesịghị ilelị mmetụta nke snowball.
E nweela akụ akụ na ụba nke Britain. The Guardian kọrọ na 3 July afọ a. ihe ndị a:
Maka oge mbụ n'ime afọ asaa, akụnụba UK enwewo mgbagwoju anya na nkeji iri na ise (akụkọ nlezianya zuru ezu) n'ihi na egwu nke otu Brexit na-enweghị ihe ọ bụla na-eme ka azụmahịa ghara imebi.
Uto na nnukwu ụlọ ọrụ ndị UK na-arụ ọrụ na June. Nke a na-akwado echiche eleghi anya maka otu ọnwa nke ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ewu ụlọ na-adanye na ntụgharị ihu.
Ọnụ ọgụgụ ndị ahụ na-egosi na akụ na ụba UK nyere 0,1% site na ọnwa atọ ruo June, ka IHS Markit na Ụlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Ịkwado na Ntinye (Cips), nke na-agụnye nyocha nke ọnwa.
Oti mkpu maka ahụ ike nke aku na uba na-agbasi ike, ugbu a, a na-atụ anya na Britain ga-ahapụ EU tupu 31 October. Ọ bụrụ na usoro a anaghị agbagha ngwa ngwa na mpaghara nke atọ nke atọ, mba ahụ ga-adịrịrịrịrị na mgbapụta tupu Brexit.
Ọnụ ọgụgụ dị na US na-atụkwa egwu, dịka anyị na-ahụ na weebụsaịtị alt-market.com (pịa iji gụọ):
Ihe ngosi dị mkpa dị ka ụlọ ahịa na-ata ahụhụ site na njedebe nke 7,8% na 8,1% ahịa.
Ndị ahịa na-agba ọsọ na ọnụego kachasị elu n'ime afọ anọ, ebe mmasị na mgbazinye ụgbọ ala na-ebili.
Anyị na-ahụ ọkwa ọkwa nke ndị na-azụ ahịa na ụgwọ ụlọ ọrụ. Anyị na-ahụ nnukwu ụlọ nkwakọba ihe (karịa 7100 closures mara ọkwa na afọ a), ịkwụsị mbupu na ibu, ebe kachasị elu n'ime PMI nke ụwa, PMI kacha ike site na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na United States kemgbe 2009 na ihe dị iche na nsụkọta njikọ nke gọọmentị, wdg.
Site na nke a, anyị aghọtalarị na m buru ụzọ kwuo ebe a na saịtị ahụ ogologo oge: nsogbu ahụ e mere atụmatụ, nke a ga-etinye ụta maka ọnwụ ahụ na akpụkpọ ụkwụ nke mmegide a na-achịkwa: ndị na-eme onwe ha ka ha bụrụ ndị nwe obodo na-ahụ maka ' mba mbụ 'àgwà. A kpachapụrụ anya mee atụmatụ a ruo ogologo oge, na ụda Trump na Brexit na-abịa ike na United States na UK, mgbe ahụ, akụ na ụba na-agbapụ, nke mere na a pụrụ iji nlezianya mee ka mba, nchebe na (nke a na-achịkwa). ) 'iche echiche nchedo' na ndi mmadu ndi ozo ga - ele anya na otu a dika ndi NSB nke '40 /' 45 afọ. Ya mere, okporo ụzọ na-emeghe ka ọ bụrụ iwu ọhụrụ site na ọgba aghara anya (na ogologo oge). Ọ bụ egwuregwu Rom oge ochie nke 'Ordo ab Chao' (ịmepụta n'usoro nke ọgba aghara) nke anyị na-ahụ na-ahụ n'ihu anyị.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịme gọọmenti ụwa, ị ghaghị ịma banyere nkwuba na ọha mmadụ. Kedu ihe ga-aka mma karịa ịnweta ìgwè ahụ dị egwu iji nweta ike ma na-eto eto na nkwado, na-etinye ụda dị oke egwu dị ka o kwere mee n'elu ọnụ ọgụgụ mmadụ dum, ma na-eme ka ụwa ghọọ ọdachi akụ na ụba wee kwụsịchaa ka a gbakọọ ya na ìgwè ahụ dị oke egwu? Nke ahụ bụ egwuregwu nke mmegide a na-achịkwa.
Ọ bụ oge maka ịhụ na ị nọ na Trumanshow eziokwu; na ụwa na-agba ọsọ dị ka ihe doro anya na ederede nakwa na obere ìgwè dị n'elu ka a na-achụga iji zipụ edemede a na ụfọdụ ntụziaka. Eziokwu dị mfe na m na-agụ na ịkọ usoro a n'ebe a ruo ogologo oge nwere ike ịbụ ihe na-egosi na ọ dịghị akụkọ ifo a na-akpọsa ebe a. Ihe ọ bụla ị ga-agbaso ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla na-enye ihe akaebe nke a. Nanị ajụjụ bụ ihe ọ ga - ewe iji teta gị tupu ị hụ ya.
Ị nwere ike ịchọpụta ihe niile banyere eziokwu ụgha a na edemede ahụ isiokwu a na isiokwu ndị metụtara ya. Were nsogbu ma nyocha ya nke ọma.
Ihe ndekọ njikọ njikọ: zerohedge.com, theguardian.com, ndị guardian.com
Brexit na atụmatụ ọgba aghara maka Europe
Nigel Farage resigns, Brexit bụ onye uche maka ikike ike na ọgba aghara ego
Ihe nchikota na nsogbu ndi ochichi bu uzo di nma nye ike EU
Ọgwụgwụ nke Brexit na-ahụ mgbe British House of Commons jụrụ
Tags: nsogbu, DB, Deutsche bank, agba, uka, kpochapụrụ, nbanye
10 July 2019 na 12: 24
Ka ọ dị ugbu a, ọ bụ nanị ịkụnye 13 ijeri n'ime nkà na ụzụ ọhụrụ ... ya mere ego dị n'ebe ahụ
11 July 2019 na 11: 09
N'isiokwu a, m na-ekwu maka iri puku kwuru nde ụgwọ ọrụ. N'eziokwu, ọ bụrụ na ị ọkụ ndị mmadụ 18k ma ị na-atụ aro na ha niile na-efu ihe dịka otu ton kwa afọ, nke ahụ bụ 1.8 ijeri kwa afọ. Ma ọ bụrụ na i mechaa ọkụ ndị ọzọ, ọ ga-ada nke ọma. Mana, ị nwere ike ịjụ onwe gị ihe ndị a na-eme n'oge a. O doro anya na ha nwere oke nhụjuanya na ọ naghị emetụta ọrụ ụlọ ọrụ ahụ kwa ụbọchị, ma ọ bụghị onye ọ bụla ga-echere ka ọ nwee ike iji nwayọọ nwayọọ gbanwee ihe omume ahụ n'ime usoro nke akpaghị aka, ma ọ dịghị ... otu nwere ike ịmalite site n'otu ụbọchị gaa na nke ọzọ ma ya mere O doro anya na o nweghị ihe ọjọọ ọ bụla. Ndi ndị ahụ na-ebu imi ha mgbe niile?
10 July 2019 na 13: 30
N'ihe atụ, ma ihe ọ bụla na-ada n'ala, ihe ka ukwuu bụ 'ohere' nke ndị ohu ga-emesị megide ụmụ nwoke nke edemede ahụ. Ndị ohu ka na-enwe ezigbo oge ma na-echere ihe niile.
10 July 2019 na 14: 03
Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu m gara aga gbasara onye na-enweghị mkpụrụ obi, ị gaghị eleghara ohere ahụ anya
10 July 2019 na 15: 04
Ohere ahụ bụ 0%.
10 July 2019 na 16: 38
Anyị buru amụma na afọ ole na ole gara aga na ọ ga-abụrịrị na ọ na-amalite site na DB, atụmatụ nke mbụ site na nhazi nke etiti. Ọ dịghị ihe ọ bụla dị n'okpuru anyanwụ, lelee ya site n'ebe dị anya ka ụlọ nke kaadị na-aga n'igwe. Otu akụ na ụba e wuru n'elu ụgwọ (gụnyere nnyefe / nnyefe / nkwụsị) ga-akụda.
" Ndi otutu mmadu ndi gbara gi gburugburu n'ebughi nkpuru obi (ndi adighi anu aru)?
The 'ego' bụ usoro AI nke na-emepụta autopilot nke mmadụ-avatar bio-robot »
Nleta nile: 13.165.391
Ndị na-eyi ọha egwu ọkọlọtọ wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October?
Martin Vrijland op Ndị na-eyi ọha egwu ọkọlọtọ wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October?
2 igwefoto op Ndị na-eyi ọha egwu ọkọlọtọ wakporo London, Manchester, Paris, Barcelona na Rotterdam na 23 na 24 October?
Jikọọ ndị 1.659 ndị ọzọ debanyere aha